Tsy misy remontada - Politika
Tsy misy remontada
Naharesy ry zareo tamin’ny lalao mandroso”. Horombahantsika ny fandresena amin’ny lalao miverina», izany no fampanantenana nataon’ny antoko Tim. Nanantena remontada ny antokon-dRavalomanana (ny hoe remontada dia teny fampiasa any amin’ny sehatry ny fanatanjahantena, teny espaniola nalaina avy amin’ny matoanteny remontar), izay zary fahazarana ny mampiasa azy ao amin’ny tontolon’ny baolina kitra eoropeanina nanomboka indray alim-pararano iray izay tany Barcelone. Tsy tanteraka ilay fanamby. Tsy nisy ilay remontada nandrasana. Ny IRD izay vondron’ny mpomba ny filoha voafidy farany teo no nandrombaka ny maro an’isa ka mitirina ambony seza. Voatery hihafihafy amin’ny akalana ny Tim. Misy koa anefa fikambanana hafa mba mitsiriritra an’io akalana ho an’ny olom-boafidy enina ambin’ny folo io. Valisoa mendrika ho azy ireo sy tsy asiana adihevitra io noho ny fahazotoany nitolona sy noho ny vinan’izy ireo mitodika amin’ny mpanorina ny vondrona politikany, na dia teo aza ny tsy fahombiazana sy ny fitsoahana an-daharana tetsy sy teroa.
Koa satria ny Tim voatery nizara ny isam-batony any amin’ny boriboritany enina eto an-drenivohitra, dia zary takon-kenatra fotsiny ihany ny fandresena na ny ady sahala azony. Ny hafetsifetsena tamin’ny fifidianana sy ny tsy-fetezana teo amin’ny zotram-pifidianana dia tsy nahatako-nafenina ny fitsipahana goavana natao azy tany amin’ny faritra hafa teto amin’ny Nosy. Novidian’ny Tim lafo ny tetikady tsy mazava nampiasainy sy ny fahadisoany teo amin’ny fifantenana ny olona nalatsany ho fidiana. Na izany aza anefa dia nahazo olom-boafidy enina ambin’ny folo ny antoko Tim (vokatra tsy ofisialy): hery fanoherana tsy azo tsinontsinoavina ny Tim izay entanin’olona efa za-draharaha amin’ny ady politika. Mila Tim matanjaka sy tsara rafitra ny lalao demokratika.
Fa inona kosa no azo ambara momba ny antoko hafa? Sombitsombiny no azon’izy ireo. Mety ho zary ho tsangan’olona fotsiny izy ireo satria kely dia kely ny vokatra. Nifarana tsy araham-baràka ny dian’ny HVM tao anatin’ny dimy taona. Nandravarava kosa ny fidiran’ny kandidà tsy miankina. Nanampy trotraka ihany koa ny haavon’ny tahan’ny olona tsy nandeha nifidy. Ny faharesena tena nahavariana indrindra dia ny an’ireo ministra izay tao amin’ny fitondrana teo aloha: tsy voatery ho finidim-bahoaka tokoa ianao na dia efa nitana toerana tao amin’ny fitondrana aza. Amin’ny ankapobeny dia tena fatiantoka ny tsy nahavoafidy ho ao amin’ny Antenimierampirenena ireo kandidà izay nivoy foto-kevitra mazava nandritra ny fampielezan-kevitra nataony. Tsy tokony hiraviravy tanana anefa izy ireny. Nahazoana akony tena mahavelom-panantenana ihany koa ilay “Politikà” laharana manokana izay natokana ho an’ny fifidianana solombavambahoaka, tsy hiraviravy tanana izahay amin’ny iraka nampanaoviana anay hanapariaka sy hanainga adihevitra araka ny fomba demokratika.
Halehibeazintsika kely ny sahan’olana ka itodiantsika ny fihemoran’ny tahan’ny fandraisan’anjara tamin’ny fifidianana amin’ny ankapobeny. Nanandrana nanentana ny mpomba azy ireo ny antoko politika, maro koa ny hetsika fanentanana notontosain’ny firaisamonim-pirenena. Tsy any izany ny olana. Efa tonga angamba ny fotoana tokony hamerenana indray ny olompirenena sy ny mpifidy hiverina indray ho eo anivon’ny fiainam-pirenena. Nisy zavatra niova tamin’ny fifidianana solombavambahoaka farany teo, tsy nanova firy ny fomba filalao politika anefa izany.
Hery politika telo no mifanandrina ao amin’ny Antenimierampirenena manomboka izao: ny IRD sy ny Tim ary ny Tsy miankina. Ireo izay nanantena fa hery roa lehibe mifanohitra no hamaritra ny raharaha politika eto Madagasikara, dia “any an-kafa izy ireo no mitady”…
Fifidianana Matoan-dahatsoratra TIM